လှုကြပါဗျ လှုကြပါ … လှုပါတယ်ခင်ဗျ လှုပါတယ် …… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » လှုကြပါဗျ လှုကြပါ … လှုပါတယ်ခင်ဗျ လှုပါတယ် ……
လှုကြပါဗျ လှုကြပါ … လှုပါတယ်ခင်ဗျ လှုပါတယ် ……
Posted by fatty on Feb 10, 2011 in News |7comments
မြန်မာကလူတွေ ဥပမာ ပင်တိုင်သမားတွေ ကိုပေါက်တို့လိုပေါ့ နေမကောင်းတဲ့နေ့ကလွဲပြီး
နေ့တိုင်း အင်တာနက်ဆိုင်ထိုင်ဂေဇက်မှာ ရေးနေကြသူတွေက … တနေ့ ၁၀၀၀ ကျော်
လောက် ဆိုင်ကိုလှုနေကြရပါတယ်။ ဆိုပါတော့ ၃ လ လောက်ဆို ၁ သိန်းလောက် လှုပြီး
ဖြစ်နေပါပြီ။ စဉ်းစားမိတာက .. ဒါ့ထက်အကျိုးရှိအောင် ဘယ်လိုများလုပ်ရပါ့မလဲလို့ ..။
နောက်ပြီး အဝေးရောက်မြန်မာများကို တခုလောက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
culture shock နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ စာစုလေးများတဦးဦးက ရေးပေးပါလို့ …။
culture shock ဆိုတော့ ဆရာကျော်ဝင်း ဘာသာပြန်တဲ့ “ယဉ်ကျေးမှုများ တိုးတိုက်မိခြင်း” လိုစာမျိုးကို ဆိုလိုတာလား ခင်ဗျာ။
အဲဒါကိုတော့ ကျနော်လည်း စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ အားလုံးလည်း စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဆင်မျူရယ် ဟန်တင်တန်ရဲ့ အဆိုအရ —
ယဉ်ကျေးမှု အသီးသီးကြား တည်ရှိနေသော ကွဲပြားခြားနားချက်များမှာ တကယ့် အစစ်အမှန်ဖြစ်ပြီး အရေးလည်းကြီးကြောင်း…………………………. ……………….. ယဉ်ကျေးမှုများကြား ပဋိပက္ခများက အိုင်ဒီအိုလိုဂျီ အပါအဝင် အခြားသော ပဋိပက္ခ အသီးသီးကို ဖြတ်ကျော်တက်နေကြောင်း သတိမူကြဖို့ ………. ……….. . ဆိုပြီး ပြောခဲ့တာ ကြောင့်ပါ။
အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ culture shock အကြောင်းကို တင်ပြနိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေ မန္တလေး ဂေဇက်မှာ ပို့စ်တင်တာကို တော်တော်ချီးကျူးမိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကျနော် ဝင်ရေးဖြစ်သမျှ ဆိုက်တွေထဲမှာ ဒီဆိုက်က အလေးဆုံးပါပဲ။ တခါတလေဆို ဘယ်လိုမှကို တင်လို့ မရတာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါတောင် ကော်နက်ရှင်ကောင်းတဲ့ ပြည်ပက ရေးတာနော်။ ကျနော့်လိုင်းက ဖလမ်းဖလမ်းထနေလို့ ရုပ်ရှင်တောင် တန်းကြည့်လို့ ရတယ်။
New post တင်ဖို့ ထိုင်စောင့်ရတဲ့ ဒုက္ခက ငြိမ်းအောင်၊ အချိန်ကုန် သက်သာအောင် Admin ကို မေးလ်ပို့ပြီး တင်ခိုင်းကြပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ Admin ကလည်း ပွိုင့်တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြည့်ပေးပေါ့ ခင်ဗျာ။
ကိုယ့်ဆရာရေ ကျနော်ဆိုလိုတာ ဒီလောက်ကြီးလေးလေးနက်နက်မဟုတ်ပါဘူး။ culture shock ၇ဲ့ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပပယ်
ကတော့ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့သိချင်တာက ဥပမာ DV ပေါက်ပြီး US ရောက်သွားတဲ့ သူတွေ ..
ဒါမှမဟုတ်လဲ တခြားတနိုင်ငံပေါ့ သူတို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ shock ကိုပြောလိုတာပါ။ နေ့စဉ်ဘ၀ထဲကအကြောင်းအရာတွေကိုပါခင်ဗျာ။ တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံ အတော်လေးကွာခြားမှုရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေကပေါ့။
ဒီက ကလေးတွေကျောင်းပြီးစ ထွက်ကြတာများတယ်လေ။ သူတို့အတွက် သိစေချင်တာပါ။
အဲဒါနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးတပုဒ်ရထားတယ်..။ သတင်းစာထဲထည့်ပြီးရင် တင်ပေးပါမယ်..။
သာမန်တွက်တာကတော့ .. အဲဒီရှော့ ခံရတာက … ၅နှစ်ကနေ၁၀နှစ်ပဲ..။
admin ကို ပေးပြီး တင်ခိုင်းရမယ်ဆို ရေးသမျှ သူတွေရဲ့ ပိုစ့်တွေကို ဘယ်ချိန်ထိ ထိုင်စောင့်ရမလဲဆိုတာလည်း စဉ်းစားကြည့်ပါဦးရှင်။ မနောတို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကွန်နက်ရှင်နဲ့ မနောတို့ကတော့ နေသားကျနေခဲ့တာကြာခဲ့ပါပီလေ။ ၈၀ ရဖို့ ၁၀၀၀ လောက်တော့ စွန့်လွှတ်ရဲပါတယ် အဟိ။ ၀ါသနာဆိုတာ ဖြတ်ရခက်သားနော်။
အင်းလေ .. မကြီးမနောရေ .. နော် …
ဒါကိုတောင် ပွိုင့်ကြောင့် ပိုစ်တွေတင်နေတာလား၊ မန်းနေတာလားလို. ကြံကြံဖန်ဖန်စွပ်စွဲတဲ့သူက ရှိသေးတရ် …
ဆူး ဆီကတော့ သုံးသုံး မသုံးသုံး တလ စီ၄၀ ပေးရတယ် နှစ်စဉ်ကြေးက စီ၆၀ ဒီတော့ အားတဲ့ အချိန် တန်အောင်သာ ၀င်ကလိရတော့မှာဘဲ။ ရွာထဲမှာ အပိုဝင်ငွေ ရှာရင်း အကြောတက်လို့ ဆေးခန်း မပြရပါစေနဲ့ ဆုတောင်းပါတယ်။